N'elu ụwa nke ejiji, ụdị ihe eji eme ihe adịghị eme ka ọ dị mkpa maka afọ ọ bụla, ndị na-emepụta ihe na-akpali akpali na echiche ọhụrụ, na ụmụ nwanyị dị ụtọ iji nweta uwe. Ikekwe nke a bụ n'ihi na ụdị nwanyị ahụ bụ nkà, onye ọ bụla na-anọchite anya nrọ ọmarịcha mara mma nke ịghọ dike nke oge ụfọdụ, na-anwa ịkwanye uwe. Ọ bụghị onye ọ bụla maara na onye na-agbapụta azụ na-ekpuchi ogologo oge, site na 20 ruo na 70, nke gụnyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe oyiyi mbụ, ụdị, silhouettes na arụsị nke ndị okike ha. Na oge a, ejiji ejiji bụ ntụziaka pụrụ iche nke ihe ndị dị n'oge ochie na nke oge a jikọtara ọnụ. Nke a bụ ụdị ejiji nke nwanyi, nke na-agụnye njirimara nke agba, ihe dị iche iche na-eme ka ọ dị mma.
Epochs nke Retro
N'afọ iri abụọ na iri abụọ na iri na otu, ụmụ nwanyị malitere ịmịghị ntutu isi, obere ejiji na obere aka na-enweghị aka, nkedo akwa, nkedo na ụgbụ, akpụkpọ ụkwụ na imi ihu, boas na boas. A na-ewerekwa àgwà ndị dị mkpa dị ka obere obere ihe ọṅụṅụ-ụmụ ndị inyom nke oge ahụ na eriri pel.
30 nke - nwere ike kọwaa dịka nloghachi nke ejidere ịdị mma na nwanyị. Na ejiji bụ elongated silhouette na ejiji na onu ogugu. Uwe elu dị ogologo, uwe ndị ọzọ dị mma, ma e nwekwara ọgaranya bara ụba. Ndị mara mma n'oge ahụ na-eyiri uwe ogologo, uwe na-acha ajị anụ na chaa chaa mara mma.
N'afọ 1940, Agha Ụwa nke Abụọ nwere nnukwu mmetụta na ejiji. Ekele ya, ụzọ agha ahụ ghọrọ ihe dị adị. Na ejiji, e nwere obere ejiji, uwe mgbatị na obosara buru ibu na usoro siri ike, nakwa ihe ndị na-acha ọcha na ndị na-emepụta ego. N'ebe a na-ekwo ekwo, ụmụ nwanyị malitere ịkwa ákwà, uwe niile wee malite iyi uwe nwoke agha.
Afọ nke 50 nyere ụwa ọchịchọ ọhụrụ maka ịma mma, na-anọchi anya ntakịrị ntakịrị ndị agha site n'ịlụ nwanyị na amara. Ụdị ọhụụ ọhụrụ ahụ ghọrọ ihe ejiji . Ndị inyom na-eji ejiji akwa, uwe mara mma, uwe na akwa ahụ na decolleté, capri, na uwe.
N'afọ ndị 1960, a na-eji oge elee anya na nnupụisi. N'oge a, e nwere ụdị nke pin-elu na hippies. Ejiji na-agụnye mkpụmkpụ dị mkpirikpi, nkpa uwe, uwe ejiji, uwe akwa, uwe akwa na akwa ukwu, akpụkpọ ụkwụ dị elu, yana uwe na agbụrụ agbụrụ.
Afọ 70 bụ mmalite nke ejiji onye kwuo uche ya. Oge a nke nchachapụta ihe dị mfe, nhazi ihu igwe na nke na-egbuke egbuke. Uwe na-aghọwanye ihe dị mma ma dị irè, ụdị ndị a ma ama bụ hippies na discos. Ejiji na-agụnye flared jeans, obere uwe, uwe shirts, uwe elu na-egbuke egbuke foto na mkpụmkpụ, Bermuda.
Ụdị ejiji n'oge a
N'ọgbọ ọhụrụ a, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe n'oge a kere ihe ndị mara mma na-achagharị azụ. Dịka ọmụmaatụ, na nchịkọta nke Mascotte, Gucci na Valentina Yudashkina, ị nwere ike ịhụ akwa ọkpụkpụ, akwa akwa, yana uwe ejiji na obere ọkpụkpụ na akpụkpọ ụkwụ na-acha azụ. A na-ejikwa ọkpụkpọ Michael Kors Pre-Fall mee ihe na ikuku nke narị afọ gara aga. Uwe mkpuchi volumetric, uwe elu, uwe ejiji na ime uwe na-achagharị azụ ga-abụ ihe magburu onwe ya maka akwa uwe ọ bụla.
Dolce & Gabbana na Dior oge a na-akwalite ụdị ntanye ntanetị. Na nchịkọta ha, ị nwere ike ịhụ obere obere mkpụmkpụ na akwa ukwu, uwe elu, mkpịsị aka dị elu, yana akwa akwa na akwa uwe.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịnwale ma gbalịa ụfọdụ oyiyi site na n'oge gara aga, cheta na ọ dị ezigbo mkpa ka ị ghara ichegharị ma gbanwee ebe site n'oge dị iche iche. Ịmepụta ihe oyiyi nke nwa agbọghọ na-achaghachi azụ, ị kwesịrị ị na-elekọta nlekọta, ntutu na omume, n'ihi na ha bụ ihe dị mkpa n'ihu nke onyinyo na-eme ka ọ zuru ezu.
Kedu ihe ị ga-eyi jaket denim nwanyi?
Onyinye agbamakwụkwọ na mmalite oge opupu ihe ubi
Kedu ihe ị ga-eji na-eyi nwanyị loons?
Uwe kachasị oké ọnụ n'ụwa
Echiche maka oge ịse oyi maka ndị hụrụ ya
Akpụkpọ anụ maka aji uwe
Ugbo "ụgbọ mmiri"
Mara mma skirts - a nhọrọ nke foto nke kachacha skirts maka ọ bụla uto
Uwe na nguzo akwukwo omuma maka mama - otu esi zere imehie?
Ụzọ ndị Ijipt
Mgbe igwu ala callas na otu esi echekwa?
Nri maka biya
Adenium sitere na mkpuru n'ulo
Ọnụ ụzọ plastic
Ụsọ nkịta nke obere
Ntu akwa maka kichin
Herpes akpịrị akpịrị
Ụmụ nwanyị na-eme windbreakers 2015
Chiiz ejiri maka biya - Ezi ntụziaka
Hotwiches na-edozi nri
Tincture nke viburnum
Enrogens hormones na-eri nri
Ụlọ ngosi nke puppets
Obodo Sri Lanka
"Akwụsị" iji welata ịdị arọ
Kedu esi kụtuo okpomọkụ n'oge ime?
Uwe eji aka aka ha nye ndi di ime